La Capannina kaSusanna - I-Airbnb
La Capannina kaSusanna
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCristian
Indlu entle ebekwe emaphandleni inombono wolwandle. Inesitiya yabucala enemidlalo yabantwana, intenetya yetafile kunye nebhola ekhatywayo yetafile, izoso kunye neendawo zokupaka. Ijongise emazantsi-mpuma, iyonwabela ukukhanya imini yonke. Ifakwe kwimizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kulwandle lwaseCivitanova Marche kunye nePorto Recanati. Iindawo ezifikeleleka lula zomdla wabakhenkethi ezifana neLoreto, iRecanati, iMonti Sibillini National Park, iFrasassi Caves kunye ne-Urbino. Kwindawo ekufutshane yeevenkile zefashoni ezifana neTod's, Prada
La Capannina yindawo yokuhlala ezimeleyo ebekwe ngokupheleleyo kumgangatho ophantsi; Ine-25 m2 ye-gazebo ene-gazebo, ilungele ukonwabela iindawo ezingaphandle ngokupheleleyo ngexesha lokutya kunye nangamaxesha okuzonwabisa kunye nokuphumla.
Umoya ozolileyo untywiliselwe kwiinduli zaseMarche, ezilungele ukuphumla. I-500 m ukusuka kwi-Villa Buonaccorsi, igadi ze-Italian ziphakathi kwe-10 ephezulu kukhuphiswano "Eyona paki intle eItali". Iikhilomitha ezi-3 ukusuka kumbindi kunye nolwandle lwePorto Potenza Picena, iflegi eluhlaza iminyaka eliqela kwaye iqhelekile yeConero Riviera kunye nePorto Recanti, iNumana, iSirolo kunye nePorto Novo. I-10 km ukusuka kwiziko lezokhenketho kunye nezorhwebo le-Civitanova Marche. Kwiikhilomitha ezili-10 ukusuka eRecanati, ilali enomtsalane esebenza kakhulu ngokwenkcubeko / ukhenketho, eye yazala amagcisa anjengoGiacomo Leopardi kunye noBeniamino Gigli. Ungalibali ukuba iikhilomitha ezimbalwa ukusuka eCapannina kunokwenzeka ukuba undwendwele ii-wineries ezimbini ezinikezelwe kuzwelonke, njenge "Casalis Douhet" kunye ne "Santa Cassella".
Siyafumaneka ukuze siphendule imiyalezo ka-whatsapp nakwiinombolo zefowuni ezi-3383191199 ngendlela efanayo esiphendula ngayo ngokukhawuleza kwimiyalezo ekwicandelo elizinikeleyo lewebhusayithi ka-Airbnb.
Ngesicelo kunye nesaziso sangaphambili siyafumaneka ukukukhapha simahla kwindlela okanye uhambo lwebhayisekile yasezintabeni ukukunceda ufumane indawo yethu entle ebekwe iLonely Planet kwindawo yesibini phakathi kweendawo onokuzindwendwela ngo-2020.
Siyafumaneka ukuze siphendule imiyalezo ka-whatsapp nakwiinombolo zefowuni ezi-3383191199 ngendlela efanayo esiphendula ngayo ngokukhawuleza kwimiyalezo ekwicandelo elizinikeleyo l…
Inombolo yomthetho: MC001661